Uhola wendlela oPhezulu, W Beam Guardrail, Rail Rail - Huiquan
Ukuhamba kweHuiquan Izixhobo
Yasekwa ngo-2006, Shandong Guanxian Huiquan Traffic Facilities Co., Ltd.ise-Guanxian New Century Industrial Zone, kwiPhondo Shandong. Ishishini eliyimali ebhalisiweyo yezigidi ezingama-20 ze-CNY, ligubungela indawo emalunga ne-43,290 yeemitha zesikwere. Thina omnye amashishini iziko olubanzi ukuba ngokukodwa kwimveliso, ukuthengiswa idiphu eshushu kwalenza iilera.
Iibholiti zichazwe kwi-ANSI B1.13M yeBanga 6 ukunyamezelana. Izinto zeBolt zihambelana ne-ASTM ...
Isithuba ikakhulu silandela i-AASHTO M180, i-GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ...
Indawo yokugcina izinto ikakhulu ukulandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Umatshini ...
Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa).
Unyango lomphezulu lushushu lwenziwe ngesinyithi, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nemigangatho elinganayo efana ne-AASHTO M111, EN1461 njl njl. Inganciphisa amandla okuchaphazela ngelixa ingozi iqokelele.
Isiphelo sesiphelo ikakhulu silandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa).
Iibholiti zichazwe kwi-ANSI B1.13M yeBanga 6 ukunyamezelana. Izinto zeBolt zihambelana ne-ASTM F568M kwiKlasi 4.6. Izinto eziphathekayo kwiibholiti ezingamelana nokubola zihambelana ne-ASTM F 568M kwiCandelo 8.83. iibholiti. Unyango lomphezulu luya kulandela i-AASHTO M232.